နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသောရာသီတွင်ကျောင်းသားများသည်စိတ်ကောင်းသောနေရန်လုပ်နေသည့်ထူးဆန်းသောအရာ ၂၅ ခုရှိသည် - သတင်း
နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသောရာသီတွင်ကျောင်းသားများသည်စိတ်ကောင်းသောနေရန်လုပ်နေသည့်ထူးဆန်းသောအရာ ၂၅ ခုရှိသည်
အကောင်းဆုံးသောအခြေအနေများတွင်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်များသည်ငါတို့အားလုံးကိုအနည်းငယ်အရူးအမူးဖြစ်စေသည်။ ၁၂ လကြာဝေးလံခေါင်သီသောသင်ကြားမှု၊ ဖြောင့်မတ်သောရာသီဥတုအခြေအနေ rollercoaster နှင့်ပိတ်ဆို့မှုမှလွတ်မြောက်တော့မည်ဟူသောကတိတော်များအပြီးတွင်ယခုနှစ်တွင်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်သည်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည် - အနည်းငယ်ခက်ခဲသည်။
2021 ခုနှစ်တွင်စာမေးပွဲသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးနေ့ရာသီတစ်လျှောက်လုံးစိတ်ကောင်းသောနေဖို့ကအလွန် vibey တည်နေရာ၌တည်ရှိ၏လျှင်, တက္ကသိုလ် - သတ်မှတ်နေ့စဉ်လမ်းလျှောက်ထက်ပိုလိုအပ်သည်, ထိုသို့ပင် Lockdown One ၏အထူးကြပ်မတ်လက်လီကုထုံးထက်ပိုယူပေလိမ့်မည်။
လန်ဒန်ကျောင်းသားများအားအိပ်စက်ခြင်းမှကင်းဝေးစေသည့်အက်ဆေး - ဖုတ်ကောင်များ၏ဘေးကင်းသောဘက်တွင်ဘာတွေရှိနေသည်ကိုသူတို့ကိုမေးမြန်းပြီးသူတို့၏အဖြေများသည်၎င်းတို့သည်ရယ်စရာများကဲ့သို့ပင်ဂရုမစိုက်ပါ။
ဒီနေရာမှာလူတွေဟာသူတို့လုပ်နိုင်တာကိုပြောခဲ့သည့်အဆန်းဆန်းဆုံးအရာ ၂၅ ခုမှာ -
လူဆိုးစာရင်းဟုထင်ရသော်လည်းရလဒ်များမှာမနှစ်သက်စရာကောင်းပြီးဤကျွမ်းကျင်မှုသည်ပူပြင်းလှသောမိန်းကလေးနွေရာသီတွင်အဖွားဘဝသည်အလွန်ဆိုးရွားလွန်းခြင်းမရှိကြောင်းသတိရစေလိမ့်မည်။ ဇာထိုးခြင်း၊ တူညီသောစွမ်းအင်၏အခြားလူကြိုက်များသောမူကွဲသည်လည်းအလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိရန်သေချာသည်။
သို့မဟုတ်ကျောင်းသားတစ် ဦး က“ lotsa boogies” ဟုချေါဆိုသည့်အတိုင်းပြဇာတ်ရေးဆရာတစ် ဦး ပြောသလိုအခြားမည်သည့်နာမည်ဖြင့်မဆိုနှင်းဆီ။ မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုသင်၏ဖိနပ်ဖိနပ်ကို ၀ တ်ဆင်ခြင်းသည်သူတို့အားအက်ဆေးဘလူးများကိုဖယ်ရှားပြီးသင်လိုအပ်သည့် serotonin တိုးမြှင့်ခြင်းကိုအာမခံသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
3. ရေမှုန်ရေမွှား - ပန်းချီအပင်များ
ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ပါမယ်, ဒါကြောင့်သံဖြူအပေါ်ကပြောပါတယ်အတိအကျ - ငါသင်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးမိပါတယ်။ သငျသညျအဓိကဂရိဒဏ္myာရီကျောင်းကစား vibes များအတွက်တ ဦး တည်းဖြစ်လျှင်သင်အနည်းငယ်ခန့်မှန်းပိုကောင်းဒီထောင့်ကိုနားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကျောင်းသားတစ် ဦး သည်သူတို့၏ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာပါရမီကိုနောက်အဆင့်သို့တက်လှမ်းလိုက်ပြီး၊ Tuscany ဒါမှမဟုတ် London မှာဘယ်သူသိတာလဲ။ သင်သည်ဤအလှအပနှင့်အတူတစ်နေရာရာတောင်ပေါ်မှာ off ဖြစ်ဟန်ဆောင်နိုင်ဘူး။
ကျောင်းသားတစ် ဦး ကသူတို့ကဥယျာဉ်တွင်ကလေးငယ်များကဲ့သို့ကစားခြင်းကိုစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောခဲ့သည် သငျသညျအနညျးငယျအနညျးငယျမှာကြိုးစားခဲ့ကြလျှင်တစ် ဦး သွားပါစေ, ကအာမခံ serotonin တိုးမြှင့်ရဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုသို့ပြောသည်။
ကျောင်းသားတစ် ဦး ကပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းစိတ်ဖောက်ပြန်ရန်သူတို့၏လှည့်စားမှုကိုကျွန်ုပ်လာမည့်ငါးနှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်သွားလိုသောခရီးစဉ်တိုင်းအတွက်အသေးစိတ်အစီအစဉ်များပြုလုပ်နေကြောင်းပြောပြခဲ့သည်။ ဤသူသည်ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှအချို့သည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမထားသည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကြာသည်။ သို့သော်ထိုနေရာတွင်ရှိသောသင်စိတ်ကူးယဉ်သူများနှင့်စီစဉ်သူများအတွက်လေးစားမှုရှိရန်။
ဤသည်မှာကျောင်းသားများကသူတို့အားရထားစီးရန်ကျပန်းစီစဉ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သူတို့ထွက်ခွာသွားရန်မည်သည့်နေရာကိုရောက်ရှိနေပြီကိုသာကြည့်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်ရိုးသားမှုအရဆိုလျှင်ရိုးရိုးသားသားပြောရန်ပြောခြင်းသည်ငါးနှစ်ခရီးသွားစီစဉ်သူ၏ဖရိုဖရဲဝမ်းကွဲဖြစ်သည်။ ငါ့ကိုဒီရူးသွပ်မှုထဲကနေ fuck ဆိုတဲ့ရယူပါ။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်စေသူငယ်ချင်းတစ် ဦး ဦး ဖြစ်စေ၊ တစ် ဦး တစ်ယောက်၏ဆံပင်ကိုဆေးဆိုးခြင်းသည်ပျော်စရာကောင်းရုံသာမကအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရလဒ်များဖြင့်ဆုချသောအခါပျော်ရွှင်သောဟော်မုန်းအမြောက်အမြားကိုပါရရှိစေသည့်အန္တရာယ်ရှိသည့်ခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျောင်းသားတစ် ဦး သည်မတော်တဆအရိပ်တစ်ခုနှင့်မတော်တဆသွားမိခြင်းကြောင့်သူမသည် Peppa ဝက်နှင့်တွဲဖက်နေသောကြောင့်သူမ DIY ဆံပင်အရောင်သစ်များကိုမည်သည့်အခါမျှကြိုးစားမည်မဟုတ်ပါဟုစိတ်ချစွာပြောနိုင်သည်။
Peppa ဟာ icon တစ်ခုဖြစ်ပြီးအခုဒီမိန်းမပဲ
တစ် ဦး ကတော်တော်လေးအလုပ်အာကာသကပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသော Workspace ကိုစေရန်သေချာနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး, ကျိန်းသေရုံချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ - ဝယ်တစ် classier ပုံစံကိုမထားဘူး။
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကဏ္ spectrum ၏အခြားဘက်ခြမ်းတွင်ကျောင်းသားတစ် ဦး က၎င်းတို့သည် Ebay တွင်ဆက်သွယ်ရေးအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းကိုမည်သို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောကြားခဲ့သည်။ Lockdown One ရှိအွန်လိုင်းဆိုင်များသည် Depop နှင့် Etsy တို့တွင်ကြီးမားပြီး၎င်းတို့သည်ယနေ့တိုင်အောင်သူတို့၏အလေးချိန်ကိုဆွဲယူနေဆဲဖြစ်သည်။
အတူတူပါပဲ အထူးသဖြင့်နေပူထွက်လာသည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်အဆုံးမဲ့ချောချောမွေ့မွေ့ဖျော်ရည်များနှင့်ရေခဲကော်ဖီများအတွက်လဲလှယ်ရေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကို Pret သို့ရောင်းချရန်နှင့်တစ်ပတ်ဝက်အတွင်းစပျစ်ရည်ပုလင်း (၃) ခုနှင့်ဗော့ဒ်ကာတစ်လီတာကို ၀ ယ်ယူရန်နောင်တမရပါ။ ငါတို့အဖော်များနှင့်အတူ။
13. Roller စကိတ်စီးခြင်း
ပြီးတာနဲ့ကျွမ်းကျင်, ဒီငြင်းသော့ခတ်နေစဉ်အတွင်းတက်ယူကြပြီအအေးဆုံးဝါသနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အစပြုသူအဆင့်သည်အနည်းဆုံးပြောရန်မှာပျော်စရာကောင်းနိုင်သည်။ သို့သော်သင်ခြစ်ရာများနှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖြတ်သန်း။ ရှင်သန်နိုင်ပါကသင်သည်စာသားအတိုင်းသာဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အိပ်စက်ခြင်းကဲ့သို့မကောင်းသောအမွှာနှစ် ဦး ကဲ့သို့ခံစားရသော်လည်း၎င်းသည်သင့်အတွက်အလုပ်လုပ်လျှင်၎င်းကိုဆက်ထိန်းထားပါ။
16. Insta မှတဆင့်လွယ်ကူစွာ scrolling
ရိုးရိုးသားသားပြောရမယ်ဆိုရင်သိပ်ထူးဆန်းတာမဟုတ်ဘူး၊ ငါ rando ရဲ့စာမျက်နှာပေါ်တွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့အခါတိုင်း 50p ပေးလျှင်, သုံးနာရီနက်ရှိုင်းသော insta ယုန်တွင်းထဲသို့ငါယခုအားဖြင့်အလွန်ကြွယ်ဝသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်လိမ့်မည်။
၁၇။ Tik Tok ကိုအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ပါတယ်
Ditto ။ ကူးယူကူးယူပါ။
သင်၏တိုက်ခန်းတွင်ကွန်ကရစ်၊ လက်တင်ကုလားထိုင်များနှင့်လမ်းပေါ်မှသင်သိမ်းဆည်းထားသောကျပန်းပရိဘောဂများမပါ ၀ င်ပါကကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသလား။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ စျေးပေါပြီးထူးဆန်းတဲ့ဒီအပန်းဖြေမှုဟာပျင်းစရာကောင်းတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ဂန္ထဝင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၁၉။ ပတ် ၀ န်းကျင်နေရာအသစ်များကိုအပတ်တိုင်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်အိမ်အသစ်နှင့်တူသည်
အလားတူမှတ်စုတစ်ခုအရသင်၏လေ့လာမှုကိုလတ်ဆတ်စွာထားခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အချို့ကျောင်းသားများသည်စွမ်းအင်ရပ်တန့်သွားခြင်းမရှိသောကြောင့်သူတို့၏နေအိမ်များကိုပုံမှန်ပြန်လည်စီစဉ်ပေးခြင်းအားဖြင့်ဤအရာကိုအစွန်းရောက်အောင်ပြုလုပ်နေသည်။ ငါသည်ဤဆိုလိုသည်ကိုအတိအကျမသေချာဘူး, ဒါပေမယ့်အချို့အကြောင်းပြချက်ငါလုံးဝသဘောတူသည်။
ဒီဟာသူ့ဟာသူပြောတယ် ကလေးတွေ၊ ဘေးကင်းလုံခြုံနေပါ။
၎င်းသည်စည်းမျဉ်းများဖြစ်သောကြောင့်ဗြိတိန်တိုင်းနှင့်အင်္ဂလန်တွင်ရှည်လျားစွာပညာသင်ကြားနေသောကျောင်းသားတိုင်း၏အပူချိန် ၁၀ ဒီဂရီထက်ကျော်လွန်တိုင်းသင်အနည်းဆုံး ၃ နာရီနေရန်လိုအပ်သည်။
ဤအချက်မှာပါလီမန်နှင့် Primrose Hills မှအမြင်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြသည်။ သူတို့သည်လန်ဒန်ဘဝ၏မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများဖြစ်သည်။ သို့သော်ယနေ့ခေတ်ပြင်ပ၌သင်စွန့်စားလျှင်အာမခံချက်ဆိုသည်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းတွင်များပြားလှသောလူမိုက်များပြားခြင်းနှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းသည်လည်းတဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာခြင်းနှင့်အတူယခုသင်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောဆိုရန်တွန့်ဆုတ်နေသည်ဟုခံစားရနိုင်သည်။
သင်၏မီးဖိုသည်ဘယ်တုန်းကမျှကောင်းချီးမရခဲ့ဖူးသည့်နက်ရှိုင်းသည့်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုသည်ဖြစ်စေ၊ ဆိုဖာအောက်ရှိဖုန်မှုန့်များကိုလျင်မြန်စွာလှုပ်ခြင်းဖြစ်စေဤအရာ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်တကယ်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ငါသင်တန်း၏, တက်ကြွစွာစားသုံးချင်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီတစ်ခုဟာဒီထက်ထူးဆန်းတဲ့၊ သို့သော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကောင်းစွာဂရုစိုက်ရန်နှင့်ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရောဂါဖြစ်ပွားနေသော်လည်းဤလူများကိုကောင်းစွာလုပ်နိုင်ခဲ့သော်လည်းသင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ တခါတရံငါတို့ရှိသမျှသည်ကအားလုံးကိုကနေအနားယူလိုအပ်ပါတယ်။
ပန်းဝင်မျဉ်းဟာအရမ်းနီးကပ်နေပြီ၊ စာသားအတိုင်းအတာအထိရောက်နိုင်တယ်၊ နှေးနှေးဖြင့်အားသွင်းလိုက်တာနဲ့မင်းအရာရာဟာပိုမိုလွယ်ကူလာလိမ့်မည်ဟုငါကတိပေးသည်။ ကျနော်တို့သိသာ lockdown နှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရာသီမှတဆင့်ရရန်အချို့သောထူးထူးဆန်းဆန်းအမှုအရာပြုမိပါပြီ, ဒါပေမယ့်ငါတို့ရှိသမျှသည်နေဆဲ, ရှင်သန်မဟုတ်လျှင်, ဒီမှာရှင်သန်နေပါတယ်, ဒါကြောင့်လုံလောက်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဂုဏ်ယူပါတယ်။
Panic Purchases - ကူးစက်ရောဂါ၏အကောင်းဆုံးနှင့်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်ဝယ်ယူမှုများ (thetab.com)